Efa nisy ny hetsika fanairana nataon’ny mpiasa ary niato kely nandritra ny fisaonam-pirenena teo. Nanomboka ny alatsinainy lasa teo dia niezaka nitety ireo tompon’andraikitra ara-panjakana ny solontenan’ny mpiasa mba hitady vahaolana amin’ny famerenana indray ny hisokafan’ity orinasa ity. Araka ny nambaran’Atoa Razakarivo Armando, solontenan’ny mpiasan’ny AAA Tiko Antsirabe dia nifanaiky hihaona amin’ireo solontenan’ny mpiasa sy ny mpamatsy ronono ireo tompon’andraiki-panjakana. Tao amin’ny Imperial Hotel Antsirabe no tokony ho nihaonana omaly alakamisy 26 oktobra fa tsy nipoitra ny tompon’andraikitry ny Indostria Vakinankaratra sy ny teo anivon’ny Prefektiora. Mpitantsoratra no nalefan’ny lehiben’ny faritra nisolotena azy nihaona tamin’ireo tantsaha sy mpiasan’ny Tiko, izay toa fanamaivanana tanteraka ny fihaonana. Tonga ihany koa ny tale jeneralin’ny AAA Tiko, izay nitondra fanazavana tamin’ireo mpiasa. Raha ny fanamafisana nentin’Atoa Razakarivo Armando dia mila misokatra ny orinasa satria potika tanteraka ny fiainan’izy ireo amin’izao fotoana. Nambarany fa ny fanjakana dia avy amin’ny vahoaka ka tokony hojeren’izy ireo ny vahoaka mpiasa. Filamatry ny faritra rahateo ny hoe : « Tsary misy harena noho ny olona » kanefa dia olon’ny faritra ihany ireo mpiasa ao Andranomanelatra ireo. Raha ny fanazavana nentin’Atoa Rabenatoandro Lanto, tale jeneralin’ny AAA dia nambarany fa efa vitan’izy ireo tanteraka ny zavatra notakian’ny fanjakana tamin’izy ireo ary efa voapetraka teny anivon’ny tompon’andraikitra ka miandry ny fanapahan-kevitry ny fanjakana sisa. Nambarany fa raha resaka fahazoan-dalana ara-tontolo iainana dia tokony ho am-polony ireo orinasa ao Antsirabe no hikatona. Ananan’izy ireo porofo ny tsy fananan’ireo orinasa afaka haba ao Antsirabe izany, kanefa dia afaka miasa ihany izy ireo.